Iindaba -Iimpawu zeZinc Alloy kunye neebheji
Zinc ingxubevange ingxubevange & iibheji
Ingxubevange yeZinc yinto eguquguqukayo ngakumbi enomda omncinci, xa kuthelekiswa Izikhonkwane ze-enamel zobhedu, Iimpawu ze-zinc alloy kunye neebheji zixabisa kakhulu ingakumbi xa ubungakanani beodolo bukhulu okanye ubungakanani bepini bukhulu. Kwibheji enkulu ye-zinc alloy yebheji, inokuba ncipha ngobunzima obuncinci. Sinokwenza iibheji zepinki ze-alloy ezinobunzima obungaphantsi kwe-1kg. Ngokusebenzisa inaliti ekubumbeni ukusetyenziswa kwe-alloy zinc, xa uyilo lunezinto ezininzi ezisikiweyo zangaphakathi, i-zinc alloy yeyona ndlela ilungileyo ngaphandle kokongeza ukusikwa. Ngelixa izikhonkwane zobhedu, izikhonkwane zentsimbi, izikhonkwane eziprintiweyo ezinokusikwa kwangaphakathi okanye iindawo ezivulekileyo kuphela zinokwenziwa ngentlawulo yokusika efunekayo. Ngaphandle kokusikwa kwezikhonkwane, kufa i-alloy zinc alloy ikwasisiphumo esipheleleyo se-3D ukubonisa iilogo ezikhululekileyo okanye ikyubikhi kunobhedu okanye isinyithi. Olunye kuphela ukhetho olunokubonisa ngokupheleleyo kuyilo oluncinci lobungakanani.
Imibala: ukuxelisa i-enamel enzima, i-enamel ethambileyo okanye ngaphandle kombala ogcweleyo
Itshathi Yemibala: Incwadi yePatone
Gqiba: eqaqambileyo / matte / igolide antique / nickel
Iphakheji: ibhegi poly / ikhadi lephepha elifakiweyo / ibhokisi yeplastiki / ibhokisi yevelvet / ibhokisi lephepha
Ukuthatha izinga eliphantsi kakhulu ekuqwalaseleni, kukho izithintelo ezininzi kwizikhonkwane ze-zinc alloy, iingqekembe, iimbasa.
** Isingxobo sobhedu lwe-antique ayifumaneki ekulingiseni i-zinc alloy
** Ukugqitywa kwe-antique + ekhazimlayo ayifumaneki kwi-zinc alloy
** Ukulinganisa i-enamel enzima ngaphandle kokuxulutywa kunye ne-enamel ethambileyo ayifumaneki kwimveliso ye-antiqued ye-zinc alloy kwimibala ebonakalayo
** Endaweni yokwenza isanti, ukusetyenziswa kwefektri # 2 kunye nenkungu
Izipho eziCwebezelayo ziingcali izikhonkwane esingabizi umenzi, sivelisa iintlobo zezimbo zezikhonkwane kwi-alloy zinc, ubhedu, ubhedu, isinyithi, intsimbi engenasici, ialuminiyam kunye nesilivere. Zive ukhululekile ukuthumela i-imeyile yoyilo kuyilo lwakhointengiso@sjjgifts.com. Kamsinya nje ukuba ufumane uyilo lwakho lwesiko, ukuthengisa kwethu kobuchwephesha kuya kuhlala kunika iingcebiso kubathengi ngesiseko seoyilo kunye nokujolisa kubo, kwaye bakubuyisele umva iibheji ezilungileyo zomgangatho.